Haalata fuulaa ammeetti irraantoo dabala. Irraanoon naannoo gubbaa muudana fuulaa irraati, iddoo barruu ykn saxaatoo itti dabaluu dandeessu dha..
Yoo barbaadde, handaarwwan ykn guuta duubbee irraantootti dabaluu dandeessa.
Islaayidoota hundarratti irraantoofi jalaanto dhabatuu
Cancala Dhangii - Fuula - Irraantoo fili
Irraantoo muudanaalee fuula keessatti diriirsuu yoo barbaadde, godayyaa irraantoo keessatti saagi.
Qaree barruu galmee barruu irraa gara irraantootti ykn jalaantootti haalatamaan sochoosuuf CommandCtrl+Page Up ykn Page Down dhiibi. Qaree barruu duuba barruu galmee keessatti sochoosuf irra deebi'ii furtuu walfakkaataa dhiibi.
Amaloota irraantoo qindeessi
Irraanetoo kana irraa
Qabeentaa walfakkaataa bitaa/mirga
Same content on first page
First and even/odd pages share the same content.
Iddoo duuwwaa muudana bitaa fuulaa fi barruu galmee gidduutti dhiisuuf hanga isaa galchi.
Iddoo duuwwaa muudana mirga fuulaa fi barruu galmee gidduutti dhiisuuf hanga isaa galchi.
Hanga addan fageenya muudana jala irraantoo fi muudana jala barruu galmee gidduutti galchuu barbaaddu gaaalchi.
Addaan fageenya kamaatii fayyadami
Qindaa'ina Addaan fageenya faccisa, irraantoo akka bal'ina gidduu irraantoo fi barruu galmeetti bal'isu heeyyama.
Hojjaa irraantoof barbaadde galchi.
Hojjaa irraantoo taasisaa qabeentaa galchituu ofumaan sirreessa.
Durargii filannoo ammee agarsiisi.
Handaara, halluu, ykn sarxaa duubbee irraantoof hiika.
Title is: Irraantoo